Mogadishu Journal » 2019 » July » 10
Guddoomiye Yariisow “Xildhibaanada maanta hadlay waa qaswadayaal aan waxba laga weydiineyn masiirka Gobolka Banaadir”
Mjournal :-Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Enj Cabdiraxmaan Cumar Cismaan “Yariisow” ayaa ku tilmaamay qaswadayaal xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka kuwaasoo sheegay inay diidan yihiin horumarka dalka. Enj Yariisow oo la hadlayay taleefishinka DALSAN ay...
Ruushka oo Soomaaliya gacan ka siinaya tababarada shaqaalaha rayidka iyo laamaha amniga
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta warqadaha aqoonsiga ka guddoomay Danjiraha cusub ee Dowladda Ruushku u soo magacawday Soomaaliya. Danjiraha Ruushka Mudane Mikhail Golovanov oo Madaxweynaha soo gaarsiiyay salaan iyo farriin uu uga siday...
Dagaal goor dhow ka bilowday deegaan ka tirsan gobolka Sanaag
Mjournal :-Wararka ka imanaya deegaan ka tirsan gbolka Sanaag ayaa sheegaya inuu ka qarxay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamo uu hoggaaminayo Kornel Saciid Cawil Jaamac Caare iyo kuwa ka tirsan maamulka Somaliland. Dagaalkan ayaa ka bilowday deegaanka deegaanka Dhoob oo ka...
71 illegal immigrants rescued off SE Tunisia
A unit of the Tunisian Maritime Guard has rescued 71 illegal immigrants of different nationalities off the coastal city of Sfax in southeastern Tunisia, Tunisian state television reported Tuesday. According to Houssem Jbabli, spokesman of the National Guard, the rescue operation...
Somalia’s military says it executed three men convicted of carrying out a deadly attack on a hotel in the capital in 2017. A statement issued by the military said the three were shot dead by a firing squad at a police academy in Mogadishu Wednesday. The men were convicted...
Safiirka Cusub ee Ruushka u soo magacaabay Somalia oo waraaqaha laga guddoomay
Mjournal :-Kusimaha Xoghayaha joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Avv. Hersi Haji Calasow, ayaa maanta oo Arbaco ah xafiiskiisa kaga guddoomay nuqul kamid ah warqadaha aqoonsiga danjiranimo ee Safiirka cusub ee Ruushka, Mudane Mikhail Golovanov....
Turkiga oo digniin culus u diray Mareykanka
Mjournal :-Turkiga ayaa maanta uga digey Mareykanka in uu qaado ‘tallaabooyin qaldan’ kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay sheegtay in ay cawaaqib xun ka dhalan doonto haddii Ankara ay ka soo iibsato Ruushka nidaamka gantaalada difaaca ee S-400. War ka soo...
Guddoomiyaha Aqalka sare oo dalka dib ugu soo laabtay
Mjournal :-Guddoomiyaha Aqalka sare , Cabdi Xaashi C/llaahi, ayaa Dalka dib ugu soo laabtay, markii uu kasoo qeyb galay shirkii Baarlamaannada Adduunka ee lagu soo gebagabeeyay Dalka Ruushka. Mudane; Xaashi ayaa waxaa garoonka Diyaaradaha Muqdisho kusoo dhoweeyay xubno ka tirsan...
Bandow lagu soo rogay deegaano ka tirsan Gobolka Sanaag
Mjournal :-Wararka laga halayo Gobolka Sanaag ayaa waxaa ay sheegayaan in Soomaaliland ay Bandow kusoo rogtay degmada Ceel-Afweyn iyo tuulooyinka hoostaga halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay dagaal beeleedyo ka socdeen. Bandowga ayaa degmada Ceel-Afweyn iyo deegaanada hoostaga...
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo maanta kulan ku leh Muqdisho.
Mjournal :-Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in ay kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshaan xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho. Ajandaha Kulanka maanta ayaa ah Akhrinta 2aad ee Hindise Sharciyeedka Duulista Hawada ee Rayidka...
Mjournal :-Maxkamada Darajada koowaad ee Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saakay oo Arbaco ah waxaa ay xukun dil toogasho ah ku fulisay Saddex rag ah oo loo heysto inay ka dambeeyeen weerar lagu qaaday Hotelka Naasa-Hablood 2 ee Magalada Muqdisho Sanadkii 2017....